त्यहाँ कुनै पनि अर्थ सिंह टाटु हो?
शरीरमा जनावरहरूको आवेदन तस्बिरहरू सधैं लोकप्रिय भएको छ। अब, टाटु पार्लर को प्रशस्त धन्यवाद व्यावहारिक सबैलाई यस्तो टाटु किन्न सक्छन्। "शरीरमा" सबै भन्दा लोकप्रिय जनावर बाघ, सिंह, ब्वाँसा, साँप, विभिन्न चरा र यति मा छन्। यस लेखमा हामी headdresses सिंह चित्रण गर्ने बारेमा तिनीहरूले के मतलब, जहाँ त्यहाँ अक्सर चित्रण गरिएको कुरा हुनेछ र जसले यस्तो सौन्दर्य बोक्न सक्छ।
टाटु - एक शरीर सजावट, जीवन को लागि एक व्यक्तिसँग रहनेछ जो। तसर्थ, षड्यन्त्र, को विकल्प र यसको लागि आंकडा, सधैं धेरै responsibly आएको छ विकल्पहरू धेरै क्रमबद्ध। यो अक्सर हामी, आफूलाई एक स्केच यसको अनुमानित मूल्य निर्धारण देख विवरण मा जा बिना छन् हुन्छ। उदाहरणका लागि: एक लिली को एक छवि, बहुमत को राय मा, यो टाटु लगाएका को कोमल र नैतिक शुद्धता व्यक्ति जोड दिन्छ। सिद्धान्त मा अर्थ गर्नुपर्छ जनावरहरु को आंकडा राजा नेतृत्व, शक्ति, संरक्षण, सुरक्षा र यति मा। तर यो छ, र के सिंह टाटु को साँचो अर्थ, तपाईं यो लेख सिक्न हुनेछ।
यो टाटु अफ्रीका र एशिया मा देखा छ। यी महादेशमा मा लामो समय बस्ने मान्छे को विश्वास मा आधारित, यो टाटु सूर्य र ईश्वरीय शक्ति हो। साथै, यो सबै भन्दा राम्रो दुनिया गर्न गएका थिए जो कसैले को स्मृति मा पैक थियो। बौद्ध, यो धेरै लोकप्रिय टाटु थियो र रहिरहन्छ पनि छ "सिंह।" यसको मूल्य कारण यो टाटु शुभकामना ल्याउन र एक व्यक्ति साहस र fortitude दिन्छ त यो जनावर, को बुद्ध द्वारा गार्ड सहित छ भन्ने तथ्यलाई गर्न।
यो त सिंह टाटु को मूल्य मानिसहरूलाई थप अनुकूल छ कि भयो। वर्ण, साहस, र अविश्वसनीय शक्ति को बल - वर्तमान नेता यी सबै सुविधाहरू। मानिस आफ्नो शरीरमा यस्तो छवि गर्छ भने, उहाँले कम से कम यो मेल हुनुपर्छ। Softie शायद यो टाटु भेट्नुपर्छ हुनेछ। एक मानिस एक आंकडा छान्नुभएको छ भने, त्यो कमजोर ठेस दिन छैन र निरन्तर सुधार, मार्फत जाने, लगातार हुन सिक्नुपर्छ।
अर्थ सिंह टाटु पनि पशु को मुद्रा मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, एक आक्रमणकारीले सिंह एक व्यक्ति आफूलाई लागि खडा सम्म, वा सिक्न चाहन्छन् सक्षम छ भन्ने हो। यदि जनावरहरु को राजा एक बैठक स्थिति छैन, त्यसपछि, मानिस आफ्नो शक्ति कसरी नियन्त्रण गर्न थाह छ र एक राम्रो छ। सिंह गर्जन खतरालाई को चेतावनी दिन्छ। त्यो व्यक्ति यो द्वन्द्व प्रोभोकिंग, मान्छे सँग कुराकानी गर्न इच्छुक छैन भन्ने देखाउँछ छ।
मध्ययुगीन समय मा जनावरहरु को राजा धेरै झण्डा र हतियार को कोट मा चित्रण गरिएको थियो। त्यसैले सिंह टाटु मूल्य अझै शाही शक्ति परिभाषित गर्न सकिन्छ। शरीरमा एक टाटु भरी, एक व्यक्तिले आफ्नो चरित्र, कार्यहरू र सोचाइ धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्न हुनेछ।
क्षेत्र मा अर्थ टाटु "सिंह" एकदम फरक र विवादास्पद छ। को "अनुभवी" मान्छे अनुसार, यो प्रहरी मा रिस छ। को को क्षेत्र मार, टाटु मानिस, कानून शक्ति अस्वीकार गर्न कामबाट र यति मा नगर्न बाध्य छ। सामान्यतया यस्ता मानिसहरूलाई अनुभव convicts नकारात्मक छन्। भन्दा यो संग fraught हुनेछ, र कि, दोषी ल्याउनेछ हार्ड भन्न, तर जेलमा शान्त जीवन हुन असम्भाव्य छ।
टैटू, amulets: निहितार्थ
टाटु सेलिब्रेटीहरू: गुप्तमा अर्थ र craze
शिक्षा इङ्गल्याण्ड, बुल्गेरियामा एक घर
एक उच्च गुणस्तरीय पुरुषहरु वालेट छाला कसरी चयन गर्न
मानिसको रुमाल र मूल नजर कसरी बाँध गर्न
टाटु हीरा: समीक्षा, मूल्य र फोटो
वर्णमाला सूचीकरण गरेर "शब्द" क्रमबद्ध जस्तै
पात venation: प्रकार, संरचना, उदाहरणहरू
ट्रेक 3900: विवरण, फोटो र समीक्षा
गायक र व्यवसायी एव्जेनी Gor
Arboretums र वनस्पति उद्यान के हो
सबैभन्दा रोचक रहस्य "नतीजा: नयाँ भेगास"
Vaginitis अधिकांश मैनबत्ती: समीक्षा
टुनिशिया मा जेलिफिस - पर्यटकहरुका लागि एक प्रकोप
चिनियाँ अभिनेत्री: विदेशी देखिन्छ र पूर्वजन्ममा लागि अद्वितीय प्रतिभा
किन झर्ने बाहिर आफ्नो दाँत बारेमा सपना? यहाँ जवाफ
सस मा मासु र माछा meatballs: विभिन्न विकल्प पकाउने